Maleeshiyaad hubeysan oo weerar ku qaaday Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan. | Warbaahinta Ayaamaha
Maleeshiyaad hubeysan oo weerar ku qaaday Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
BELEDWEYNE-AYAAMAHA-Maamulka Gobolka Hiiraan ee Maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay Ciidamo ka tirsan Hirshabeelle iyo kuwa uu watay Sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere ku dhexmaray Magaalada Baladweyne.
War-saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Hiiraan ayaa waxaa lagu sheegay in xalay kolonyo galbineysay Guddoomiye Cali Jeyte Cismaan, Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Hirshabeelle iyo Saraakiil Ciidan kana yimid degmada Feer-Feer ay rasaas xoogan ku fureen Maleeshiyaad hubeysan oo uu hoggaaminayey Sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan oo Warsaxaafadeedka Akhriyay ayaa yiri “Iyada oo falalka nuucan oo kale ah ay caado u aheyd kooxaha Nabad diidka ah in kolonyo Dowladeed weerar lagu qaado waxuu Ahaa fal-Huwan halistiisa waxaane la Horgeyn doona Maxkamada awooda u leh Cidii ka Dambeeysay ayuu yiri” Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan.
Hirshabeelle ayaa sheegay inay mas’uuliyad ka saaran tahay ka shaqeynta amniga iyo xasiloonida guud ee Gobalka, isla markaana aysan cidna laga aqbali doonin khal-khl gelinta Amniga Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.